OnePlus Nord N100 wuxuu leeyahay shaashad leh heer cusbooneysiin ah 90 Hz | Androidsis
OnePlus Nord N100 wuxuu leeyahay 90 Hz bandhig cabir cusboonaysiin ah
Qiyaastii saddex toddobaad kahor ayaa cusub OnePlus Nord N100 oo ay weheliso Nord N10 5G, labada sharadood ee cusub ee astaanta qaybta dhammaadka-dhamaadka ah. Labadan taleefan ee casriga ahi waxay leeyihiin astaamo waxqabadkoodu hooseeyo iyo qeexitaanno farsamo, iyo sidoo kale qiimayaal aan badnayn oo ka dhigaya kuwo la awoodi karo inta jeeb ku jirta.
OnePlus, markii la soo bandhigayay labadan nin, ayaa shaaca ka qaaday in Nord N10 5G uu soo bandhigay muuqaal leh 90 Hz heerka cusbooneysiinta. Waqooyiga N100, dhinaceeda, waxay la timid 60 Hz guddi, oo la fahmay maxaa yeelay waa mobilada ugu raqiisan taxanahan iyo, sidaas darteed, shirkadda. Si kastaba ha noqotee, tan iyo Muuqaalka Android cadeeyo taas tan dambe waxay sidoo kale ku faantaa heerka cusbooneysiinta 90 Hz.
1 OnePlus N100 wuxuu leeyahay shaashad ka shaqeysa in ka badan 60 Hz
OnePlus N100 wuxuu leeyahay shaashad ka shaqeysa in ka badan 60 Hz
Qiimaha ku dhow 179 euro ee yurub iyo 179 rodol ingiriiska ee Boqortooyada Midowday, OnePlus N100 waxaa laga bilaabay suuqyada aduunka iyadoo la adeegsanayo shaashad 60 Hz ah, sidaan sheegnay. Iyadoo ay taasi jirto, cutubka in Hay'adda Android iibsaday dib u eegis ayaa lagu soo bandhigay 90Hz guddi. Dhacdadan, waxay la xiriireen soo saaraha Shiinaha si ay ula xiriiraan xiisahaas una helaan jawaab, iyo waxa sumaddu sameysay waxay ahayd in la caddeeyo macluumaadka, iyadoo laga tegayo bar-teknolojiyadda - annagana - shaki ayaa laga qabaa sababta dhacdada daah-furku u yiri in mobilka wuxuu shaqeeyaa 60 Hz.
«N100-ka waxaa lagu qalabeeyaa muuqaal 90Hz ah. Heerka cusbooneysiinta dhabta ah waxay kuxirantahay qaabeynta, codsiyada la isticmaalay, iyo xadidaada ka shaqeynta. "ayuu yiri OnePlus.
OnePlus Nord N100 ficil ahaan waa a oppo A53 Caan caan ah, mobiil soo bandhigaya shaashad 90 Hz ah, ayaa xusid mudan. Fikradda ah in OnePlus Nord N100 loo soo saaray sidii 60 Hz kombuyuutar casri ah ayaa laga yaabaa inuu ka dhashay arrintaas gudida tani si habsami leh ugama shaqeyso marxalad sare marwalba sababo la xiriira arrimaha processor-ka, taas oo aan awood u lahaan doonin inay soo bandhigto waxqabadka ugu sarreeya mar kasta oo leh heer cabbir ah oo ah 90 Hz, taas oo ah waxa ay shirkaddu soo jeedinayso jawaabteeda Hay'adda Android.
Isticmaalka heerka cusbooneysiinta 90 Hz kaliya maahan waxay dhibaato ku noqon laheyd Snapdragon 460, Chipset-ka processor-ka ee OnePlus Nord N100, laakiin tayada muuqaalka shaashadda casriga ah. Taasi waa sababta aysan shirkaddu u maleynaynin - mana u maleyneyso - muuqaalkan, oo horeyba u ahaa isbeddel ku yimid bartamaha dhexe iyo moobiillada sare ee suuqa.
The OnePlus 9 ayaa daadanaya: tani waxay noqon doontaa naqshadeeda iyo qeyb ka mid ah astaamaha
Xusuusnow, taleefanku wuxuu leeyahay guddi teknolojiyad IPS LCD ah oo ka kooban qiyaastii 6.52 inji wuxuuna soo saaraa HD + qaraar dhan 1.600 x 720 pixels (20: 9). Midkani wuxuu la yimaadaa 4GB RAM iyo 64GB meel lagu kaydiyo oo la ballaadhin karo. Waxay sidoo kale soo bandhigeysaa batari 5.000 Mah ah oo leh 18 W oo degdeg ah, 13 MP + 2 MP + 2 MP oo ah kamarad saddex-laab ah, iyo 28 MP oo toogta hore ah.
Waxaan uga tageynaa qeexitaankiisa dhameystiran xaashida farsamada ee soo socota, taas oo aan sidoo kale ka heli doono kuwa Nord N10 5G:
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » OnePlus Nord N100 wuxuu leeyahay 90 Hz bandhig cabir cusboonaysiin ah
OnePlus Nord N10 5G iyo N100 ayaan u cusbooneysiin doonin Android12
Sharad asal ah oo ku saabsan dagaalka samurai ee lala leeyahay Demon Blade, RPG oo leh shaabad Barcelona ah